Brody PR: Nguva yekuPIYA Yako Ruzhinji Hukama Hukama Firm | Martech Zone
Chitatu, Nyamavhuvhu 19, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nhasi, pamwe chete nemazana mashoma emamwe mabloggi ane simba, vatapi venhau nevatungamiriri vemaindasitiri, ndakagamuchira tsamba isina kukumbirwa kubva kuBeth Brody (beth@brodypr.com) nechisviniro chakaburitswa mairi nezve Jump Start Social Media Kuburitsa E-Bhuku Nyowani paSocial Media Kushambadzira Kwebhizinesi Diki.
Yakanga isina kushata zvakakwana kuti yaive SPAM, zvakare yakapa pachena runyorwa rwevanogamuchira nemazita emumwe munhu wese uye email kero. Wakambonzwa nezvazvo Bcc?
Ini handizive Beth uye ini handizive Brody PR, asi ndiri kuzovazivisa, pamwe nevese tarisiro yavo nevatengi, kuti vanokodzera kukwirwa kukuru kwavari kuwana parizvino. Mhinduro imwe (pindura kune vese) mune yakakura email tambo (inoenderera) kubva kune inozivikanwa indasitiri nhamba inoverengwa:
Ndibvise pano f-- g runyorwa rwandisina kumbobvunza kuti ndive pairi uye rusingakwanise kuzvinyoresa kubva kwarwo.
Chinyorwa chevanhu chakabuda ichi ndicho ndiani yevanokurudzira. Ndichiri kunakidzwa nezvandakaita ari rondedzero, ini zvakare ndakatsamwa kuti Ruzhinji Rwehukama femu yaigona kuunganidza runyorwa seizvi kungoita spam kwatiri. Ndine chokwadi chekuti Jump Start Social Media E-Book rakanakisa e-bhuku… asi ini handiende kurikanda, kubatanidza naro, kana kurikurudzira nekuti ndakapepetwa nekambani yavo yePR.
Makambani ehukama neruzhinji, kupfuura chero ani zvake ari muindasitiri, anofanirwa kucherechedza zvinoitika zvisina kukumbirwa nemaemail uye kukosha kwekutaurirana-kwakavakirwa munyika ino ye spam. Ndine fomu rekubata pane yangu saiti saka vanhu vanogona kundidonhedza tambo - ndiyo nzira yakanaka yePR yakasimba yekubatana neni… kana kuburikidza makumi masere evamwe venhau vandinotaurirana navo. Izvi zvaingova husimbe PR, yakachena uye yakapusa.
Iye zvino email yangu kero iri mumaoko aMwari-anoziva-ndiani nekuti imwe PR agency yakanganwa mirau yese ye Public Relations. Mune mutsa, ini ikozvino ndatsikisa yavo email kero kuti pasi rese rione. Inzwa wakasununguka kudonhedza Beth chinyorwa kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge taita
Brody ichawedzerwawo kune iyo refu runyorwa rwe PR Spammers by Gina Trapani. Zvinondiita kuti ndinetseke kuti Brody angave akatarisana nekirasi-yekuita mhosva yekutyora kweCAN-SPAM chiito sezvo vasina kupa nzira dzekusarudza kubva mukukurukurirana kwakawanda.
Inotevera nguva iwe yaunobhadhara PR yakasimba, tsvaga kuti ivo vanozowana sei vanopesvedzera mumusika uye kuti vachaenda sei kwavari. Kana zvakaita saBrody PR, usavashande. Havana kuzviwana. Kana iwe uine yakasimba senge Brody PR ndiani ari spamming influencers, vapise. Ivo vari kuzoita zvinokuvadza zvakanyanya kupfuura zvakanaka kune yako brand.
Kuwedzera Kuverenga: Iyo email imwechete yakauraya sei PR yakasimba, Ndingadai ndakakoshesa ruregerero, Ruzhinji Rukama runokundikana: Chidzidzo uye rant… Ndine chokwadi chekuti kune vamwe vari kuuya…
ZVIMWE ZVAKAITIKA: 8/21/2009 Yakatora yakanaka kwazvo kubva kuBeth Brody nhasi ichikumbira ruregerero kune iyo snafu, Beth ine 'zvidzidzo zvakadzidzwa' chinyorwa chinouya munguva pfupi.
ZVINOKOSHA ZVIMWE ZVAKAITWA: 10/19/2009 Takadzoreredza katsamba kubva kune imwe Brody PR kuti takanga tine ma link edu zvisirizvo muPost yedu! Tinokumbira ruregerero nemoyo wese uye zvinongedzo zvakagadziriswa.
Tags: dhonetaMuApp Adskerntypography
Ruzhinji Rwehukama Makambani Akagadzirira Kuwedzera Social Media
Aug 20, 2009 na12: 17 PM
Chikamu chakanakisa nezve Brody PR ndechekuti pandakabaya kuenda pawebhusaiti yavo, chinhu chekutanga chandakaona yaive yavo yemusoro musoro iyo inodada ichizivisa kuti "Anoshanda nehana…"
Kana izvo zvisiri Irony, saka ini handizive kuti chii.
Aug 20, 2009 na1: 17 PM
Doug - vanhu vanoita izvi zvinhu zvezvinhu vane pfungwa isingatendeseke yekuzvikoshesa. Tarisa pane yake yevatengi runyorwa; hauna kufadzwa here? Kunyangwe iwe usina kusarudza-kupinda, izvo zvaanofanira kukuudza zvinogara zvichikosha, zvine hungwaru zvekuti ane chokwadi chekuti unozoonga kuti akakuwanira neemail email.
Imi vezvemagariro venhau vakomana hamutombowana kana zvasvika kune zvakakosha zvechokwadi.
Aug 20, 2009 na1: 42 PM
Kutenda nekutumira izvi, Doug. Hwavo hukama hweveruzhinji, saka pane hukama hwevezvenhau, uyezve ivo VANOFANIRA kuve hukama hwemagariro enhau (amburera iyo vanokurudzira vanofanirwa kuwira pasi). Kubatanidza izvi zvitatu kuita izwi rimwe chete kukundikana kusingagumi muindasitiri yese, uye humbowo hunovimbisa kuti mafemu mazhinji haatore iwo.
Aug 20, 2009 na2: 38 PM
Kunyatsotsvedza nzira yawakadonhedza iyo iwe yawaifunga kuti une simba ipapo mumutsara wekutanga
Aug 20, 2009 na5: 59 PM
Brody PR #kukundikana
Aug 20, 2009 na6: 15 PM
wow - hongu iyi ihombe f-up asi kunze kwekunge ichi chiri chikanganiso chinodzokororwa pachikamu chavo iwe unofanirwa kunyatsopa mukana wekusahadzika. Vanhu vane mazuva akaipa uye vanokanganisa dzimwe nguva. Ko kana mumwe munhu akashevedza musoro wako uye otora mhomho yenyoka mushure mako pese pawakakanganisa mukufamba kwezuva? Iyi posvo ingadai yakangoita seyakagadzirika pasina kuseka pachena iyo agency uye mushambadzi ari mubvunzo. Zviripachena, iwe unofanirwa kuve uine rakaipa zuva iwe pachako kuti uve uyu akatsamwa uye murwi.
Aug 21, 2009 na2: 56 PM
Ini handibvume. Uye zvirizvo, ini ndinofunga ichi posvo chaive chisina kukodzera nehasha. CHOKWADI mukadzi anoziva BCC. Akakanganisa. Iyo CC neBCC mutsara angori mamirimita kubva kune mumwe nemumwe.
Iwe unobvuma kuti hauzive Beth Brody kana Brody PR. Ungataura here zvinhu zvawataura mune ino positi kumeso kwake. Ungati here kumutengi wake pamberi pake kuti vamudzinge nekuti akanganisa nezve kusaisa vanhu mumutsetse weCCC? Handikuzive, saka handizive mhinduro yemubvunzo iwoyo, asi ini ndinofarira kuziva.
Iyi ndiyo FAR kubva kune yakaipa spam. Iwe hauwani chaiyo spam?
Mukadzi uyu akaita chikanganiso chechokwadi uye mhinduro yacho yanga isina kukodzera zvachose. Wese munhu akapindura, kusanganisira nekota yawakashandisa, ZIVA zvavari kuita. Ivo ndivo vaive vachishungurudza vamwe vese, vachiziva. Uye ndine chokwadi chekuti ino haisi nguva yekutanga kuti izvi zviitike. Ndinoda kuziva pfungwa dzako muchinyorwa chandakanyora nezve chidimbu.
Zvemagariro midhiya "gurus" uye mabloggi ndeanekuzvikudza jerks
Zvakare, kana iwe uchida chaiyo PR inokundikana nyaya, verenga iyi. Iyo parter mbiri uko mutengi anouya nekufamba kwakanyarara kwekupedzisira pakupedzisira.
Hei PR, mablogiki haasi maturusi ekushandisa
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Zvakaipa PR chiitiko nyaya. Mutengi wePR firm ari obtuse.
Aug 21, 2009 na4: 59 PM
1. Ini handina kutanga ino inotyisa nhevedzano yezviitiko, dspark. Ndakatozoitawo nazvo.
2. Iyi ikambani yeVANHU. Iri ndiro JOBHO ravo uye, vanofungidzirwa, yavo NYANZVI. Zvakafanana nekubvunza kana murwere ane gumbo rakadamburwa netsaona haafanire kutsamwiswa naChiremba.
3. Yaive isina kukumbirwa email yekutengesa isina NO-kubuda.
4. Vakavaka pachivande runyorwa urwu rwemaimeri kero pasina vanogamuchira vachiziva.
Uku kwaisave kukanganisa kwechokwadi - zvaifanira kutora mwedzi kuisa runyorwa urwu pamwechete uye vane vatengi vavo VANOBVARIRA sevhisi iyi. Izvo hazvisi kutendeseka, zvakapesana - zvese zvakaipa uye zvinonyengera.
Aug 22, 2009 na11: 44 PM
Inofanira kukuremera kuti usamboita chero mhosho, Douglas. Ndinokurumbidza nekuda kweizvozvo, kuti uve usingatadzi kuti usazombokanganisa muPR.
Ndiri naDavid pane izvi. Pamusoro pepamusoro uye zvisina basa, asi iwe unofanirwa kunge wakanzwa kudiwa kwekuenderera kupfuura mamwe machira.
Aug 23, 2009 na4: 46 PM
Handina kumbotaura kuti handina kukanganisa. PANDAKAITA zvikanganiso, ndakasangana nemhedzisiro. Dai isu tisina mhedzisiro, isu hatingazive kuti yaive mhosho, handiti? Ndiri kutaurirana naAmai Brody, ndavatumira ebook rangu paBusiness Blogging, uye ndikapa kuvabatsira kuti vasimbise nezvese zvavaida.
Zvirokwazvo wakadaro. Zvese kunze kwekuda.
Aug 21, 2009 na9: 20 PM
Ini handizive nezveDoug, asi ini ndaizotaura zvakafanana kuna Mai Brody zvakananga kana ndikawana mukana.
Ini ndinofunga zvakatoipa kupfuura echinyakare spam. Ruzhinji Rwehukama mafemu haasi vashambadziri. Ivo vanofanirwa kuve nyanzvi dzekutaurirana vanoziva mhando dzerudzii meseji dzinofadza vateereri uye ndedzipi nzira dzinozovashatirisa. Kana paine chero munhu anofanira kuziva kuve nechokwadi chekuti meseji inoenda nenzira kwayo, iri PR yakasimba.
Aug 23, 2009 na4: 47 PM
Ndakave nemukana. Beth Brody akandibata neemail uye ndokukumbira mvumo yangu kuti nditore bhurogu yangu mubhurogu yake nyowani, Zvidzidzo Zvakadzidziswa. Uye ini ndakakumbira kukumbira ruregerero - uye ndikarigamuchira. Ndinofunga Mai Brody vachapora kubva pane izvi… hapana mubvunzo.
Aug 21, 2009 na7: 55 PM
Ndaiwanzofunga kuti hapana munhu anoziva kuti BCC yaive yei. Ini ndachinja pfungwa dzangu.Ndinowana nhau uye PR kuburitswa zuva rese ne (dzimwe nguva) MAZANA emae-mail kero mu TO: munda (kazhinji mazita uye mae-mail evose midhiya munhu mudunhu reIndiana kubva kuredhiyo kuTV kudhinda, vazhinji vacho ndine chokwadi chekuti havadi yavo e-mail kero pachena kutenderedzwa, tisingatauri kuti ndinotenda izvi zvinotyora mutemo wehurumende, handizvo here?).
Ini ndinofunga ndezvinangwa uye nemaune mukuyedza kurega vanogamuchira vazive WHO vakagamuchira e-mail. Kutanga, inosimudza kuzvikoshesa kwemutumi nekuratidzira kune vateereri vane hurefu hunofungidzirwa hwekukanganisa kwavo. Zvakare nekuita izvi, zvinoisa zvishoma zvinyoronyoro (kana pamwe HASINA kungwara) kumanikidza kune anogamuchira kuti ashandise zvinhu. Mushure mezvose, kana vese vakuru vakakurudzira vakagamuchira zvinhu uye vangangodaro vachizvishandisa, handifanire kunge ndiri kuzvishandisa futi?
Uye icho chinonyanya kukosha ndeichi: iye akakusvitsa iwe kuti utaure nezvazvo, handizvo here? Hameno kuti vanhu vangani vakaverenga bhurogu yako ndokubaya baya kune zvinongedzo zvakapihwa? Chii chinonzi chekare chezvematongerwo enyika? "Kuziviswa kwakaipa kuri nani pane kusatomboita - ingoperetera zita rangu zvakanaka." Iwe wakatora chirauro, chirauro uye sinker. Uye mupfungwa iyoyo, akaita basa rake ZVAKANAKA WELL.
Aug 24, 2009 na12: 46 PM
Icho chinonakidza kutora ... asi isu tiri kutaura nezvaBrody, kwete mutengi. Icho chingave chinetso!
Aug 21, 2009 na9: 12 PM
Mhinduro yedu kune izvi ndeiyi: http://www.slaughterdevelopment.com/2009/08/19/th...
Aug 25, 2009 na8: 39 PM
Kukundikana neBCC yakanyanya ATD kupera, asi muPR unofanirwa kutumira zvinoburitswa kune vezvenhau vanobatana - ndiyo chete nzira yaungawana kune wese munhu akakodzera ichiri inhau. Ini ndinonzwisisa kutsamwa kwako nekuita kuti kero yako yeemail ibudiswe pachena - uye uri pachokwadi kunzwa nenzira iyi - asi, sebloggi, haudi here kuziva nezve nyaya dzenhau kana dzaitika, uye dziri nyowani uye nyowani, pane kumirira kubvunzwa?
Ini handizive kuti zvakaita sei mumatunhu, asi kuno kuEngland vatori venhau vanosaina kune vezvenhau dhatabhesi zvakanyanya kuitira kuti vatumirwe zvinhu zvinoenderana navo nevanhu vavangadai vasina kubatana nazvo. Chii chakaipa nazvo?
Aug 25, 2009 na8: 45 PM
Uyezve, iyi inogona kuve iri yechidiki account account, mumwe munhu achangotanga muPR, uye akakanganisa. Wakamuparadza zvachose. Sei uchive usina tsitsi? Zvirinani kuti chikanganiso chake chaive chisina mhosva.
Ivo havafanirwe kunge vakapedza mwedzi vachiunganidza zvinyorwa - unogona kuenda kuMedia Atlas, Vocus, Cision kana chero nhamba yemamwe marezinesi enhau uye dhonza runyorwa rwevatapi venhau, mabloggi, vapepeti, vagadziri… chero chii zvacho. Ndakatumira kuburitswa kuvanhu 227 nezuro, nhasi ndanga ndichivafonera vese kuti ndione kana vachida kuishandisa. Ndine mutoro wevabvunzurudzo uye kufukidza kune wangu mutengi kubva mairi. Izvo zvakaipa here? Kwete. Ndiwo mashandiro anoita zvinhu - ivo vanozviziva, ini ndinozviziva, hapana munhu ari kurira pamusoro pazvo.
Aug 25, 2009 na9: 54 PM
PRMira, Zvavakaita, uye zvauri kuita, hazvisi pamutemo muUnited States. Iwe unofanirwa kugovera nzira yekubuda-kunze, zvikasadaro iwe uri kutyora chiitiko cheKANOGONA-SPAM. Iwe unoona here kuti uri kuisa yako kambani panjodzi? Mira Spamming vanhu. Isa opt-n ​​pane yako saiti uye unganidza maemail kero nenzira yakakodzera - nemvumo yevanhu. DougSent kubva kuVerizon Wireless yangu BlackBerry
Ini handisi kuisa kambani yangu panjodzi, nekuti vatori venhau vanoonga kutumirwa ruzivo rwunoenderana navo uye rwazvino. Aya ndiwo mashandiro anoita PR uye vanhu vazhinji vanofara nekugadzwa, vanhu vanogashira zvinoburitswa zvinosanganisirwa. Dzimwe nguva unogona kuzvitumira kune mumwe munhu zvisina kukodzera, vobva vakuudza, unokumbira ruregerero uye hapana anonyora blog yakaipa nezvazvo.
Zviripachena ini handizive nezvemitemo iri muAmerica, asi seVocus, Cision, nezvimwe, zvinoshanda pasi rose (ndinofunga vanogona kunge vari makambani eAmerica), handifungidzi kuti zvakasiyana zvakanyanya. Ini chaizvo ndinofunga urikugadzira dutu mune teacup. Hazvina kuita sekuti iye akakutumira email nezve mapenisi ekuwedzera mapiritsi kana kukumbira rako rebhangi - ichi chaive chidimbu chechokwadi chePR, icho, sezvinobvumwa, iye akasundira nekutadza BCC, asi ndiwo madanho acho. Iko hakuna kudikanwa kwekunyanyisa kwako.
Aug 28, 2009 na2: 30 PM
Aug 28, 2009 na11: 09 PM
"Aya mashandiro anoita PR" hachisi chokwadi. Ndine hukama nemafemu mazhinji ePR uye ivo havaunganidzi maameri kero evanokurudzira mumusika vasina mvumo yavo vozovapa SPAM. Ndingakurudzira zvikuru kuti uongorore zvakare mazano ako. Unogona kunge uri kuwana mhedzisiro yevatengi vako, asi izvo ZVINOGONESESA kuti uwane mhedzisiro zvirinani nekuvaka mvumo-based hukama hwakanyanya kwazvo.
"Ndinokurudzira kuti iwe uverengewo mitemo yeUK paSPAM," Makambani anokwanisa kusvikwa 'kutonhora' nemapepa emaimeri asi mune izvi maemail anofanira kunge aine chirevo chekusarudza. "